Nandritra ny 16 taona mahery, ny Reef Resilience Network dia nanjary mpitarika manerantany tamin'ny fananganana ny fahafahan'ny mpitantana an-dranomasina hitantana, hiaro ary hamerina amin'ny laoniny ny haran-dranomasina sy ny jono haran-dranomasina eran'izao tontolo izao. Mba hahatratrarana izany dia mampifandray ireo mpitantana ny vatoharan-dranomasina sy ireo mpikatroka amin'ny namana, manam-pahaizana ary ny siansa farany paikady farany izahay, ary manome fiofanana an-tserasera sy fanampiana ary fampiharana. Ny Network dia fiaraha-miasa tarihin'i Ny Nature Conservancy izay ahitana mpikambana mavitrika maherin'ny 3,700, ary tohanan'ny am-polony misokatra amin'ny varavarankely vaovaompiara-miasa ary mpiasan'ny TNC, ary koa manampahaizana 100 manerantany momba ny vatohara, ny jono, fiovan'ny toetrandro ary fifandraisana izay manofana ho mpanazatra, mpanolotsaina ary mpamakafaka momba ny votoaty.
Tsindrio eto raha hamaky ny bokikely RRN.
Nandritra ny 16 taona, ny tambajotra Reef Resilience Network dia nitana andraikitra lehibe amin'ny fampifandraisana ireo mpitantana sy mpikaroka an-dranomasina amin'ireo mpiara-miasa aminy, manam-pahaizana manerantany, fitaovana, ary fahalalana hamolavola sy hampiroborobo ny vahaolana amin'ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fiarovana ny haran-dranomasina manerana an'izao tontolo izao.
Na dia maro aza ny tantara lazaina, jereo eto ny fanohanan'ny tambajotra sy ny fomba fandikany azy ho tena atao ho an'ny fahasalamana ho an'ny fahasalamana.
Tsidiho ny Staff
Ny fiaraha-miasa amin'ny talen'ny Coral Reef, mpiara-miasa
Petra dia tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny ezaka fananganana iraisam-pirenena ho an'ny tambajotra sy fitantanana ny fampiharana ny programa fandaharan'asa fiarovana ny harena voajanahary NOAA-Coral / TNC mba hanohanana ny ezaka ataon'ny mpitantana haran-dranomasina sy ireo mpiara-miombona antoka any Floride, ireo nosy Virgin Islands, Puerto Rico, Hawai 'i, Samoa amerikana, Commonwealth avy any avaratr'i Mariana Avaratra, ary Guam hiarovana sy hanamora ny fitantanana ny haran-dranomasina. Nandritra izany, i Petra dia niasa ho an'ny State of Hawai'i Division of Aquatic Resources (DAR) izay nitantana ny paikady momba ny haran-dranomasina momba ny haran-dranomasina, anisan'izany ny famolavolana sy fampiharana ny faritra amoron-dranomasina any amin'ny Nosy Main Hawaiian sy ny fampandrosoana ny fandraisana andraikitra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. hanatsarana ny ezaka fampiharana manerana ny firenena. Miaraka amin'ny raharaham-birao maîtrise avy amin'ny Oniversiten'i Washington izy izay nitarika ny asa momba ny fizotry ny asa tany Guinea-Bissau, Afrika Andrefana.
Kristen dia mamolavola sy manatanteraka paikady, fiaraha-miasa, fifandraisana, ary hetsika fampivoarana fahaiza-manao mba hisy fiantraikany amin'ny politika sy ny fampiharana ho fanohanana ny fiarovana ny ranomasina maneran-tany amin'ny alàlan'ny Reef Resilience Network. Ny fiaviany momba ny tontolo iainana interdisciplinary dia fifangaroan'ny fifandraisana, politika, fitantanana ary fikarohana. Anisan'ny zava-nisongadina momba ny asa: fanomezana fanohanana stratejika ho an'ny hetsika fitantanana mifototra amin'ny fiarahamonina ao Hawai'i; fampiharana ny fanentanana ara-tsosialy momba ny haran-dranomasina any Hawai'i sy ny Nosy Mariana Avaratra; fitantanana ny fandaharan'asa momba ny tontolo iainana ho an'ny valan-javaboarin'ny Friends of Virgin Islands; ary manao fikarohana eny an-kianja sy laboratoara momba ny tetikasa mifandraika amin'ny fahasalaman'ny haran-dranomasina, ireo karazana trondro atahorana ho lany tamingana ary ny fitantanana ny jono. Kristen dia manana mari-pahaizana maîtrise momba ny fitantanana ny tontolo iainana amoron-tsiraka avy amin'ny Oniversite Duke. Izy koa dia mpanao hosodoko menaka matihanina.
Ny tambajotran-tsoratry ny tambajotran-tsoratry ny haran-dranomasina, ny fikajiana voajanahary
Liz dia mitarika ny fampandrosoana ny siansa, ny loharano ary ny fiaraha-miasa ho an'ny tambajotra. Miara-miasa akaiky amin'ireo manam-pahaizana eran'izao tontolo izao izy mba hampifangaro sy hizara ny fomba fanao tsara indrindra mifototra amin'ny siansa ary hanohanana ireo fiofanana amin'ny Network and webinar mba hahazoana vaovao eo am-pelatanan'ny mpitantana ny haran-dranomasina. Liz dia manana mari-pahaizana PhD momba ny siansa an-dranomasina sy ny fiarovana ny tontolo iainana avy ao amin'ny University of Duke, izay nanaovany fanandramana an-tsaha, fanadihadiana momba ny haran-dranomasina lehibe, ary fanontaniam-pitantanan'ny mpitantana hahafantarana ny fiantraikan'ny fifandraisan'ny tontolo iainana amin'ny paikady fitantanana haran-dranomasina. Ny fikarohana nataony dia nahitana mialoha ny haran-dranomasina, ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fanalefahana ny toetr'andro, ny adin-tsaina marobe, ny fifandraisan'ny karazan-tsoa ary ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina sy ny toeram-ponenana an-dranomasina hafa. Manantena fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa vaovao i Liz hanohanana ny ezaka amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina sy ny fitantanana.
Coordinator Network Reef Resilience, The Conservancy natiora
Mandrindra ny tambajotra i Cherie fampandrosoana ny Toolkit, tranonkala, ary fampiofananas manohana ny ezak'ireo manampahaizana momba ny haran-dranomasina sy ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana any Florida, ny nosy Virijiny Amerikana, Puerto Rico, Hawai'i, Samoa amerikana, ny Commonwealth ao amin'ny Nosy Mariana Avaratra, ary Guam. Alohan'ny hidirana amin'ny Global Ocean Mpikambana, niasa izy drafitra iray hanombanana ny fitohizan'ny tontolo iainana eo amin'ny tetik'asa momba ny fambolena sy fiompiana kely eo amin'ny fikambanana WorldFish Center ao Malezia. Niara-niasa tamin'ny fanombanana ihany koa ny mety hisian'ny fisian'ny mpanjono amin'ny karazana amoron-dranomasina ao Vancouver, Kanada ho an'ny Tetikasa Natural Capital. Manana mari-pahaizana Master in Marine Affairs avy ao amin'ny Oniversiten'i Washington izy izay mifantoka amin'ny fampiasana ny harena an-dranomasina sy ny fitantanana ny faritra voaaro an-dranomasina any amin'ny faritra Philippines.
Mifandray amin'ireo mpitantana, mpitsabo ary manam-pahaizana i Michelle; manohana ny fampandrosoana ny enti-manana; ary mandrindra ny hetsika fianarana, fifanakalozana ary fanohanana ara-teknika ho an'ireo mpitantana an-dranomasina ao anatin'ny Reef Resilience Network. Talohan'ny nidirany tao amin'ny The Nature Conservancy, i Michelle dia niasa tao amin'ny Fandaharanasa Coral Reef Conservation an'ny Sampan-draharaha misahana ny fiarovana ny tontolo iainana any Florida, izay nitantanany tetik'asa mifandraika amin'ny fanabeazana sy ny asa fitoriana. Izy dia manana Master of Professional Science avy amin'ny University of Miami, izay nifantohany tamin'ny tontolo iainana haran-dranomasina sy ny politika iraisam-pirenena.